ओली–मोदी मित्रता ‘मधुमास’ मात्रै हो !
मिलन विक्रम सिंह बस्नेत ,
केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन भारतले आफ्नो एजेन्टलाई फुल स्पिडमा परिचालन गर्यो । भारतीय राजदुत मञ्जित सिंह पुरी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मधेशी दलका नेताहरु कम्मर कसेर लागिपरेका थिए । माघ फागुनको जाडोमा उनीहरुले चुहाएको पसिना त्यतिकै खेर गयो । कांग्रेसले आफूसँग मिल्न प्रचण्डलाई पाँच वर्षे प्रधानमन्त्रीको अफरले पनि काम गरेन् । कुनैपनि हालतमा वामगठबन्धन फुटाउन भारत लगायतका शक्तिहरु विफल भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको शक्ति वढेको आभाष उनीहरुलाई भएको छ । त्यसैको परिणाम हो हालैको भारत भ्रमणमा ओलीले भारतबाट पाएको सम्मान ।
प्रचण्ड गठवन्धनको विपक्षमा उत्रिएका भए उनलाई सुवर्ण अवसर नै थियो । विना कुनै मेहनत प्रधानमन्त्री बन्न चाहिने बहुमत उनको पक्षमा थियो; दक्षिणको आशिर्वाद । तर, राजनीति गाठो यति बलियो बनेर कसियो कि वामगठबन्धन ‘टसमस’ नै भएन् । भारतका सामु एउटा विकल्प रह्यो–केपी ओलीतर्फ मित्रताको हात बढाउनु । त्यस अर्थमा मोदी–ओली मित्रता बाध्यात्मक जस्तो मात्र देखिन्छ । मन मिलेको सम्बन्ध होइनकि यो औपचारिक जस्तो मात्र देखिन्छ । मन नपरेको व्यक्तिसँग बाध्यताबस् मित्रता गर्नुपर्दा बहुत ज्यादा असहजता महसुस हुन्छ । त्यो मोदीलाई पनि महसुस होला । आफुले प्रधानमन्त्री हुनबाट छेक्न खोजेको व्यक्ति नै दुइ तिहाइ मतका साथ प्रधानमन्त्रीहुँदा मोदीलाई तिक्तता छैनहोला भन्न मिल्दैन् । तर, यतिखेर समय र साथ फेरिएको अवस्था छ । त्यो तिक्तता मित्रतामा बदलिए जस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका बेलापनि त्यो झल्को देख्न सकिन्थ्यो ।
ओलीले भारतमा जुन सम्मान पाए र जस्तो प्रकारको उनको प्रस्तुति रह्यो; यसमा उनको व्यक्तित्वसँगै भारती प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्वार्थ पनि मुख्य कारण बनेको छ । स्वार्थ के मानेमा भने, वितेका चार वर्षमा मोदीले छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धलाई न्यानो राख्न सकेनन् । भुटान बाहेक सबै सार्क राष्ट्रसँग भारतको सम्बन्ध बिग्रँदै गयो । नेपालले समेत मोदीलाई टेरपुच्छर लगाएन । भारतीय सदनमा विपक्षले उनको तीखो आलोचना ग¥यो–मोदीको गलत छिमेक नीतिकै कारण नेपालमा चीन सशक्त रुपमा पस्यो; भारत आप्mनै आँगनमा प्रभावहीन शक्तिराष्ट्र बनाईयो भन्दै । त्यसपछि मोदी सतर्क बने ।
नेपाल र भारतका मिडियामा यतिखेर चर्चा गर्नुपर्ने अर्काे एउटा विषय यो हो कि अन्ततः मोदी आफैँ गलत सावित हुन पुगेका हुन ? नेपालको नयाँ संविधानलाई नस्वीकार्नु, संविधानमै विरोध देखाएर एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्रमाथि नाकाबन्दी गर्नु, नाकाबन्दीकालीन ओली सरकार ढालेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु तर पछिल्लोपटक वामगठबन्धन भत्काउन नसक्नु । अनि केहीसिप नलागेपछि वाध्य भएर तिनै ओलीसँग ‘देखावटी मित्रता’ बढाउनुको विकल्प मोदीसँग भएन । होइन भने संविधान संशोधनको मुद्दामा कुनै सुधार नभइ किन सहमति बन्ने वातावरण बन्यो ? कि यो जनतालाई देखाउन रचिएका ‘नाटक’ मात्र त होइन ? जनता जान्न चाहन्छ । भारतको सधैँको चाँसो र चिन्ता आतंकवाद बन्ने गरेको छ । बर्मा, चीन, पाकिस्तान र बंगलादेशका बोर्डरहरु छिचोल्दै हतियार र आतंकवादी अलकायदा र आइएसआइका लडाकू भारत छिरेको आंशका बेला–बेला गर्ने गरिन्छ । यसलाई जति नै नियन्त्रण गर्न खोजे पनि सफलता पाउन सकिएको छैन । त्यसको असर नेपाललाई पनि पर्छ । किनकि नेपाल–भारत खुला सीमानाका कारण दुई देशबीच आंतकवादको खतरा उत्तिकै हुन्छ । यो नेपाली पक्षले पनि अनुभूत गरेकै विषय हो । तुलनात्मक रुपमा नेपालतर्फको सीमाना अपेक्षाकृत रुपमा शान्त र सुरक्षित छ अहिलेसम्म । भारतका लागि, साँच्चिकै भन्नुपर्दा, कश्मिर, पूर्वाेत्तर भारत तथा बंगालको तुलनामा सुरक्षाको दृष्टिबाट नेपाल बढी विश्वसनीय सावित हुँदै आएको छ ।
तर, भारतको स्वार्थ र चिन्तनशैलीबीच आकाश जमिनको फरक छ । किनभने सुरक्षा चासो अनुरुपको व्यवहार उनीहरुबाट प्रकट भईरहेको छैन । नेपालको राजनीतिलाई अस्थीर राख्न; नेपालमा विकास हुन नदिन र नेपाली समाजलाई तोड्नमा भारतीयहरुले धेरै धन र समय खर्च गरे । मुखले नेपाललाई मित्र भनियो तर व्यवहारमा शत्रुलाई भन्दा तल्लो तहको व्यवहार भईरह्यो । सैन्य सहयोगका नाममा थोत्रा र कामै नलाग्ने हातहतियार दिईयो । भुकम्प पीडितका लागि दिने भनिएको आर्थिक सहयोग अझै आएको छैन । जलविद्युत, सडक, भवन निर्माण आदि हरेक विकासे कार्यमा भारतले साझेदारी खोज्यो; नेपालले साझेदारी दियो तर जुन जुन काममा भारतले साझेदारी खोज्यो; तिनै कामहरु कुनै सुरु नै भएनन्; कुनै सुरु त भए तर बिचैमा अलपत्र छाडिए ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल चीनसँग सहकार्य गर्छ भने भारतको टाउको दुखाइ किन ? आप्mना सीमाहरु नेपालतर्फबाट सुरक्षित रहुन् भन्ने चाहन्छ भने नेपालको विकास र सम्वृद्धिको स्वार्थलाई उसले बेलैमा सम्बोधन किन नगर्ने ? उसको ईच्छा अनुसार संविधानसंशोधन नभएको झोंकमा नाकाबन्दी लगाउँदा उसका थिंक ट्यांकहरु; एसडी मुनिहरु सुतिरहेका थिए ? के त्यसबेला नेपालका लागि राहत सामग्री बोकेको चीनियाँ रेल चीनबाट छुट्ने छ भन्ने उनीहरुले सोचेका थिएनन् ? अनि भारतको चाँसो आतंकवाद हो भन्दैमा के नेपालले भारत बाहेक अन्य एसियाली मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध राख्दै नराख्नु ? भारतको सुरक्षा चाँसो चीन हो भन्दैमा नेपालले चीनबाट कुनै प्रकारको विकासे सहयोगै नलिनु ? भारतको स्वार्थ सम्बोधन गरिदिने नाममा नेपाल सधैँभरी अस्थिर राजनीति र अविकास बीच गिजोलिएर बस्नु ? भारतले यी विषयमा आफुलाई सच्याउन ढिला गर्नु हुदैन् ।
नेपाल आर्थिक र भौतिक रुपले विकसित होस् भन्ने भारतीय चाहना अझैपनि दुविधायुक्त छ । बितेका ६०/६५ वर्षको ईतिहासले यो कुरा सिद्ध गरेको छ । भारतले लाईसेन्स ओगटेर बसेका कुन कुन जलविद्युत्त आयोजनाहरुको काम सुरु भयो र कुन कुन सम्पन्न भए ? हामीसँग यसको लेखाजोखा नै छैन किनभने काम नै सम्पन्न भएको छैन । पञ्चेश्वर आयोजना बनाउने भनेको २० वर्ष बढी भईसक्यो तर आजसम्म प्रगति शुन्य छ । यसको मुख्य कारण थियो–लोडसेडिङ । लोडसेडिङबाट सबैभन्दा बढी नाफा भारतले नै पाईरहेको थियो । डिजेल, ईन्भरटर अनि जेनेरेटरहरु उतैबाट आयात भईरहेका थिए । अहिले विगतलाई नियाल्दा महसुस हुन्छ, भारतीय कम्पनीहरुले जलविद्युत्त आयोजनाका लाईसेन्स ओगट्नुको मुख्य कारण नै नेपालमा लोडसेडिङ सदाकाल रहोस् र भारतीय पेट्रोलियम, ईन्भर्टर र जेनेरेटरको बजार बढी रहोस् भन्ने थियो ।
यो उद्योग यतिखेर चौपट भएको छ । भारतले नदीनाला ओगटेर बस्दा पनि नेपालले जलविद्युत्तमा क्रान्तिकारी फड्को मारेको छ । यतिखेर चीनले नेपालमा उत्पादन गरेको विजुली भारतले किन्दैन भन्नुको पछाडि नदीनालामाथिको आप्mनो पकड कमजोर नहोस् भन्ने मनसाय त छ नै, जलविद्युतमा एकलौटी राज गर्न पाउँ भन्ने अनुनय पनि लुकेको छ । नेपालको लागि केहि वर्ष भारतलाई विद्युत बेच्नु जरुरी छैन । वर्षाको समयमा हामीसँग बढी भएको विद्युत घरेलु प्रयोगमा र औद्योगिक प्रयोगमा खपत हुने देखिन्छ । पक्कापक्की कुरो हो, चौबिसै घण्टा निर्वाध रुपमा विद्युत आपूर्ति हुन थाल्यो भने भान्साबाट ग्याँस सिलिण्डर विस्थापित हुन थाल्नेछन् । उद्योगतर्फ रहेबचेका जेनेरेटरहरु पनि कबाडीको भाउमा मिल्काईनेछन् ।
नयाँ उद्योगहरु पनि खुल्नेछन् । तसर्थ, नेपाल सरकारले अहिले नै भारतलाई बिजुली बेच्नका लागि आँत्तिनु जरुरी छैन । नेपालका लागि जलविद्युत उर्जाको राम्रो बजार बंगलादेश हो । तर, बंगलादेश र नेपालबीच जलविद्युत व्यापारका लागि २७ किलोमिटर भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि भारतलाई मनाउने कसरी ? नेपालले यो विकल्प रोज्न ढिला भइसकेको छ । किनभने केहि वर्षअघि भारतले अफगानिस्तानबाट विजुली आयात गर्ने कुरो चर्चामा थियो तर पाकिस्तानले बाटो नदिएपछि त्यो योजना त्यसै तुहियो ।
रेल र जल मार्ग
नेपाललाई रेलको आवश्यकता छ, यो बुझिने कुरो हो तर पानी जहाजको पनि आवश्यकता छ, यो चाहिँ बुभ्mन नसकिने कुरो हो । वाम सरकारले नेपालमा रेल ल्याउने भयो भन्दै विपक्षीहरु हताश भईहाल्न आवश्यक छैन । विपक्षका समर्थक विश्लेषकले पनि यस विषयमा धेरै टाउको दुखाउनु आवश्यक छैन किनभने रेल आजको भोली नै गुडाउन सम्भव छैन । रेल गुडाउनका लागि चाहिने पूर्वाधार आदिको अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । न त हामीसँग त्यस्तो दक्ष जनशक्ति नै छ । न त हामीसँग त्यस्तो पर्याप्त बजेट नै छ । न त हामी कहाँ सुरु गरिएका परियोजना समय मै सम्पन्न गर्ने परम्परा छ न त हाम्रो दक्षिण छिमेकी नै आफ्नो बोलीलाई व्यवहारमा उतार्ने स्वभावको छ । जल यातायातको सवालमा पनि यिनै कुराहरु लागु हुन्छन् ।
त्यसकारण, कम से कम पनि आउँदा दश वर्ष हामीले रेल र जल यातायातका कुरालाई एकादेशको कथा मानेर बस्नुको विकल्प छैन । सन् २०१९ मा भारतमा आम निर्वाचन छ, राष्ट्रिय संसदको । र, यसपटक मोदीसँग हिन्दुत्व बाहेक नागरिकलाई आफुतर्फ आकर्षित गर्ने अर्काे मसालेदार चुनावी नारा छैन । भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण जमाएर बसीरहेको सरकारलाई यस वर्ष दुई ठूला भ्रष्टाचार काण्डले चुनौती थपिदिएको छ । यसका साथै, विपक्षीहरुले यसपटक बलियो गठबन्धन बनाएर मोदीमाथि धावा बोल्ने पक्कापक्की छ । राहुल गान्धीको व्यक्तित्व मोदीलाई टक्कर दिने खालको छैन तर पनि भाजपाका लागि यो चुनाव निकै टाउको दुखाई बन्ने देखिएको छ ।
यस्तै, नेपालभित्र पनि कुखुरा चोर, ठग, जड्याहा जनप्रतिनिधिले सम्हालेका स्थानीय निकाय अनि अहिलेसम्म अधिकारको बाँडफाँट नभएका प्रदेश सरकारहरु अनि भ्रष्टाचारले गिजोलिएको कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्नु ओली सरकारका लागि टाउको दुखाई बन्ने छ । विकासको नाममा स्थानीय निकायमा बजेटमाथि भईरहेको ब्रम्हलुटलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ अहिलेसम्म सरकारले चाँसो देखाउन सकेको छैन । ओली र मोदी मित्रता यो एक वर्ष मधुमास मनाउने छ । रेल र पानीजहाज त्यसकै तयारी मात्रै हो । सन् २०१९ पछि पनि भाजपाले नै सरकार बनाउने मौका पायो भने त्यसपछि मात्रै यस मित्रताको खास गहिराई नाप्न सकिने छ । उसै पनि, नेपालका लागि जल यातायात भन्दा हवाई यातायातका लागि केहि नयाँ रुटहरु तत्कालका आवश्यकताहरु हुन् । नेपाली विमानहरु भारतको आकाश हुँदै आप्mनो गन्तव्यतर्फ जाने भएको कारण, नेपाल सरकारले भारतसँग थप रुटहरुको बारेमा पहल थाल्नु पर्छ ।
प्रकाशित १२ बैशाख २0७५ , बुधबार | 2018-04-25 10:47:55